Andorra, iakhawunti, ucwangciso lwerhafu
Esona sizathu siphambili sokuba uninzi lwabathengi bethu bafune ukuvula i-akhawunti yebhanki phesheya kukusebenzisa izibonelelo abanokubanika zona, kunye nezibonelelo zerhafu kunye nemfihlo yokuba sesinye sezona zibalulekileyo. Abantu abafuna ukuvula iakhawunti engaselunxwemeni eAndorra akukho mfuneko, kodwa abaninzi bayayeka xa befumana ulwazi malunga nezivumelwano ezibini. I-Andorra iseke namanye amazwe ukuze ayeke ukuthathwa njengendawo yerhafu.
Nangona kunjalo, namhlanje sifuna ukuthetha nawe malunga nendlela ekubonakala ngayo iiakhawunti ezingaselunxwemeni eAndorra ayichaphazeli ukusebenza kwayo ukuze uqhubeke nenjongo yakho yokufumana i-akhawunti phesheya.
Ngaba kufanelekile na ukuvula iakhawunti engaselunxwemeni eAndorra?
Uninzi lwabantu, ngokukhawuleza emva kokufunda malunga nokubonakala okuphezulu kweeakhawunti ezingasasebenziyo ngaphakathi Andorra, bathatha isigqibo sokuba eli ayilulo ulawulo kubo. Kungenxa yokuba ukuba abanakufumana iphakheji epheleleyo yezibonelelo (zabucala kunye nezibonelelo zerhafu), ithini le ngongoma?
Ngapha koko esi sisizathu esivakalayo ngokupheleleyo sokukhetha i-akhawunti yebhanki kwenye indawo, nangona kunjalo sifuna ukucacisa into ebalulekileyo. Kuxhomekeka kwiinjongo zakho, kwiimfuno kunye nezinto ozikhethayo, awuyi kuhlala ufuna imfihlo yezemali ngeakhawunti ye-offshore e-Andorra. Ukuba ucinga ukuba kulula ukufumana elinye igunya elinolu ncedo luhlanganisiweyo, kufuneka uqale uthathele ingqalelo oku kulawula kakuhle.
Nangona iiakhawunti ezingaselunxwemeni eAndorra zibonakala ngokucacileyo, kukho iintlobo ezahlukeneyo zezinye izibonelelo kunye nezibonelelo seso sizathu sokuba olu lawulo lwaselunxwemeni luqhubeke nokuba yenye yeenkokeli kwaye kutheni abantu abaninzi besenayo phakathi kwezinto abazikhethayo.
Izibonelelo zeakhawunti engaselunxwemeni eAndorra
Ngemfihlo yemali ngaphandle kwendlela, i-Andorra iye yaba yenye yezona ndawo zizinzileyo nezikhuselekileyo phesheya kwezilwandle xa kufikwa kwimali yakho, kuba ngemigaqo ikwazile ukususa igama elithi "ukubambela irhafu" elalihamba nayo, ebangela inkqubo yayo yebhanki kunye neebhanki zithembeke kwihlabathi liphela. Oku kuvumela iiakhawunti ezingaselunxwemeni e-Andorra ukuba kube lula ukuba zivulele abantu bamanye amazwe kwaye zingabi nemigaqo xa kuqhuba imisebenzi yezizwe ngezizwe.
Ukongeza koku, kukho inzuzo enkulu yerhafu yeeakhawunti ze-Andorra.. Nokuba yinkampani okanye umntu, abantu bamanye amazwe banokufumana inzuzo enkulu yerhafu kwiiakhawunti ezingaselunxwemeni eAndorra, ebavumela ukuba bonge imali eninzi ngonyaka.
Ngolwazi oluthe kratya, nxibelelana nathi ngokunqakraza LAPHA.
Fumana izithuba ezitsha nge-imeyile
Andorra ukungaziwa ukungaziwa kunye nokuba yimfihlo inzuzo ECyprus Ubumfihlo akhawunti yebhanki iakhawunti yebhanki engaphesheya iakhawunti iiakhawunti zebhanki engaphesheya Delaware España ukuphepha irhafu uxolelo lwerhafu mali mali Ukunyanzela abaCebisi beHlabathi bamanye amazwe waseSwitzerland Gilbhraltha Indawo yokuhlala irhafu utshintshiselwano lolwazi oluzenzekelayo Ireland Imimandla engaselunxwemeni Ulawulo lwaphesheya akukho rhafu Likhtensteyin I-luxembourg Malta ocde elwandle IPanama Amaphepha ePanama kwerhafu iirhafu zerhafu amazwe aselunxwemeni ucwangciso lwerhafu ngasese EUnited Kingdom imfihlo yebhanki entlalo iinkampani ezingaselwandle nkampani switzerland European Union ezintle izibonelelo zerhafu